မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဒညငျးသီးရဲ့ ကောငျးကြိုးနဲ့ ဆိုးကြိုး တစတေ့စောငျး
Posted by mabaydar at 11:45 AM
Big big congratulations sis ! I really happy for both of u. Anyway u want eat and just take small piece only better for u. Take care for little prince / princess. 😊👍 Poepoe
6/10/2016 8:56 PM
ဟယ် ဘေဘီလေးနဲ့ ဖြစ်နေပြီလား ဝမ်းသာစရား)))
6/11/2016 11:39 AM
အရမ်း ကြိုက်ပေမယ့် မစားဖြစ်တော့ဖူးဗျာာ
6/15/2016 9:31 PM
အရမ်းကြိုက်တယ် စားနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့် အရင်လို တစ်ခါစား ၅ လုံး ၆ လုံး မဟုတ်တော့ဘူး။ အများဆုံး ၂ လုံး ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါတောင် မစားခင် သစ္စာအဓိဌာန် ရွတ်ရသေးတယ်။ တညင်းသီးတစ်လုံးစားပြီး ရေ ၁ ခွက် အပြည့်သောက်ပါ့မယ်။ တစ်ရက်ကို အများဆုံး ၄ လုံးပဲ စားပါ့မယ်။ ဒီတစ်ရက်စားပြီး ၁ လ အတွင်း ထပ်မပူဆာတော့ပါ။ မလွယ်တော့ မလွယ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျောက်ကပ်သိပ်မကောင်းလို့ ဒီလောက်စားတာတောင် တော်တော်များနေပါပြီ။ ဒီတစ်ခုထဲက ဆိုးကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ မယုံပါဘူး။ တန်ဆေး လွန်ဘေးလို့ပဲ ယုံကြည်ထားတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ခံအားပေါ့။
6/17/2016 10:13 AM
နံတာကလွှဲရင်အကုန်ကြိုက်လို့ ခုလိုလေးသေချာရှင်းပြပြီးအထောက်အထားနဲ့တင်ပြပေးတာကိုအရမ်းကျေနပ်တယ် ကျေးဇူးလဲတင်တယ် မလေးရှားတို့အင်ဒိုတို့ကအရမ်ဒစားကြတယ် အစိမ်းသက်သက်စားတာမြန်မာတွေလိုပြုတ်စားကြော်စားတောင်မဟုတ်ဘူးနော် ထိုင်းမလေးတယောက်ဆို ၀က်သားရယ်အုန်းနို့ရည် ဒညင်းသီးရယ်ရောချက်တာ မြန်မာမလေးတွေကကြောက်လို့မစားရဲဘူး
နောက်တော့လဲစားကြတာပါပဲ....အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့ အမကတော့ဝက်သားမစားလို့ လိုက်မစားဖြစ်ဘူးလေ.....
6/28/2016 6:35 AM